Ogaden News Agency (ONA) – Shir ka dhacay magaalada Columbus oo HAAD uu ka qaybgalay
Shir ka dhacay magaalada Columbus oo HAAD uu ka qaybgalay
Waxaa lagu qabtay magaaladaColumbus,Ohioshir si fiican loo soo agaasimay oo ay soo abaabushay jaaliyadda S.Ogaadeniya eeColumbusOhio.
Shirka waxaa ka soo qeyb galay wafti sare oo ka kala yimid Europe iyoNorth America. Waftiga ka yimidEuropeayaa waxaa hogaaminayay Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee JWXO mudane Maxamed Abdi Yasin (Diirane). Shirka ayaa sidii dhaqanka u ahayd JWXO waxaa aayado qur’aan iyo wacyi gelin diini ah ka jeediyay Sheekh Mukhtaar. Sheekha ayaa dadkii shirka isugu yimid ku baraarujiyay Alla ka cabbsi iyo inay ilaaliyaan midnimada uu Ilaahay faray dadka muslimiinta ah.
Kadib waxaa khudbado dhaadheer oo qiiro leh ka jeediyay Ambsador AbdiKarim Aw Ali iyo MaxamedRashiid Abdullahi oo ah hogaanka Kormeerka eeNorth Americaee JWXO. Dadka shirka ka soo qaybgalay oo aad u danaynayay arimaha halganka iyo heerka uu marayo ayaa waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay Mudane Diirane.
Mudane Diirane waxuu ka warbixin dheer ka bixiyay taariikhda Jabhadda iyo heerar ay soo martay. Waxuu carrabka ku dhuftay iney Xoriyaddu maanta ugu dhow dahay oo midhii naftood hurayaasha qalabka sida ay keeneen uu si cad u muuqdo, sababtoo ah umadda waxay isku raacday in aanay ka daalin halganka oo aanay uga laabanin wadadada dheer ee loo marayo xoriyadda. Mudanahu waxuu kaloo ka sheekeeyay xaaladda ay Ogaadeniya mareyso maanta, taasoo uu ka warbixyay dhibaatada uu cadawga ku hayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan.
Shirka waxaa kaloo ka hadlay oday dhaqameedyo, dumar, dhalinyaro, iyo culuma ow diin. Shirka waxuu kasoo gabagaboobay si guul ah. Mudane Diirane waxuu u qaban doonaa xunbaha ururka eeOhiosiminaar shaqo qeexid iyo abaabul ah isugu jiro maalinta berri ah.